Bangladesh bowler Shoriful Islam, centre, celebrates the wicket of Zimbabwean batsman Blessing Muzarabani, during the second One Day International series cricket match between Zimbabwe and Bangladesh, at Harare Sports Club, in Harare
Zimbabwean batsman Tadiwanashe Marumani walks off the pitch after been dismissed during the final cricket T20 match against Pakistan at Harare Sports Club.
Zimbabwe batsman Burl Ryan, left, walks off the pitch after been dismissed during the cricket T20 match against Pakistan at Harare Sports Club, Zimbabwe.
Pakistan bowler plater Usman Qadir,centre, appeals for the wicket of Zimbabwean batsman Luke Jongwe during the cricket T20 match against Zimbabwe at Harare Sports Club.
Pakistan batsman Mohammad Rizwan throws his bat in the air after been dismissed during the T20 cricket match between Zimbabwe and Pakistan at Harare Sports Club, in Harare.
Zimbabwean bowler Burl Ryan bowls during the T20 cricket match between Zimbabwe and Pakistan at Harare Sports Club, in Harare.
Zimbabwean players celebrate after beating Pakistan during the T20 cricket match between Zimbabwe and Pakistan at Harare Sports Club, in Harare.
Zimbabwean players shake hands with Pakistan players and umpires at the end of the T20 cricket match between Zimbabwe and Pakistan at Harare Sports Club, in Harare.
A worker at a coffin making company waits for clients inside the company premises in Harare as Zimbabwe began a 30-day lockdown in a bid to rein in the spike in COVID-19 infections threatening to overwhelm health services.